जीवनभरको पसिनाको मूल्य खोज्दै किसान ! - Sabal Post
जीवनभरको पसिनाको मूल्य खोज्दै किसान !
रमेश लम्साल/अशोक घिमिरे – ती दारी जुँगा फुलेका छन्, ती दाँत सबै फुक्लेका छन्, तर पनि … को खेतमा छ बूढो किसान । बर्खा झरी, हिउँद भरि, काम ग¥यो म’री म’री, तर पनि चैन छैन, बस्ने खाने ठेगान छैन, बराजुको ऋणमा छ बूढो किसान । जनगायक जीवन शर्माको ‘बूढो किसान’ गीतमा भनिए जस्तै सर्लाही धनकौलका ६० वर्षीय सीताराम महतो १२ दिनदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य खोज्दै राजधानी काठमाडौँ आउनुभएको छ । वर्ष दिनभरि मिहिनेत गरेर लगाएको उखुको मूल्य नपाएपछि महतोसँग सङ्घीय राजधानी आउनुको अरू कुनै विकल्प भएन । गुलियो उखुले जीवनमा तीतो स्वाद दिएपछि पीडा सुनिदिने कोही भएनन् उहाँका लागि । मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गएपछि तीन तहका सरकार बनेका छन् तर उहाँका लागि ती सरकार ‘आकाशको फल आँखा तरी म’र’ भनेजस्तै भएको छ ।
सिंहदबारले आफ्नो पीडा सुनिदेला र उखुको मूल्य पाइएला भनेर माइतीघर मण्डलामा सबेरैदेखि भेला भएर विरोधको मलिनो स्वर सुनाएको दुई हप्ता पुग्न लाग्यो । तर हालसम्म महतोको आवाज सुनिदिन कुनै सरकारी अड्डा तयार देखिँदैनन् । बालबच्चा पालौँला, हातमुख जोडौँला भनेर ऋणधन गरेर लगाएको उखुले तीतो स्वाद दिएपछि ‘कि त म’र र कि त गर’ भनेजस्तै भएको महतोलाई । पुसको चिसोमा हिमालजस्तै सेता फुलेका दाह्री, मलिन अनुहार, झुत्रा लुगा र फाटेको जुत्ता महतोको परिचय हो ।
सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिलले विगत तीन वर्षदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य नदिएको भन्दै गुनासो सुनाउन माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बस्नु मेरा लागि खुशीको विषय पक्कै होइन । फूलेका दाह्री सुम्सुम्याउँदै, लामो श्वास खुइ्य गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “उद्योगले रु ५५ हजार दिनै बाँकी छ, यसपटक उद्योगलाई उखु दिऊँ कि नदिऊँ, सरकारलाई मेरो प्रश्न छ ।” उखु मिलले पैसा नदिएको भन्दै गुनासो गर्न काठमाडौैँ आउँदा महतोलाई रु पाँच हजार ऋण लाग्यो । लगाएर आएको धोती मैलो भयो । धोती फेर्ने पैसा नभएपछि सतुङ्गलमा कवाडी सञ्चालन गर्ने गाउँकै साथीले ‘पाइन्ट’ सापटी दिएको यथार्थसमेत महतोले सुनाउनुभयो ।
सर्लाही हरिवनका ४० वर्षीय जितन यादवको पीडा पनि महतोको जस्तै छ । श्रीराम सुगर मिलले दिएको सास्ती कसलाई सुनाउने भन्ने द्विविधामा देखिनुभएका यादवले भन्नुभयो, “हाम्रो पीडा काठमाडौँले सुन्छ कि भनेर यहाँ आएका हौँ । तर अहिलेसम्म हाम्रो गुनासो कसैले सुन्नै चाहेन ।” आफूले अहिले पनि पाँच कट्ठामा उखु खेती गरेको विवरण सुनाउँदै यादवले भन्नुभयो, “यसपटक उखु का’ट्ने बेला भएको छ, का’टाँै कि नकाटौँ, द्विविधामा छु ।” महतो र यादव जस्तै उखुको मूल्य खोज्न काठमाडाँै धाएका सर्लाहीका किसान आगामी दिनमा कुनै हालतमा उखु खेती नगर्ने सोचमा छन् । सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिल र महालक्ष्मी सुगर प्रालिले १० वर्षदेखि उखुको रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । तीन वर्षदेखि उखु किसान सङ्घर्ष समिति गठन नै गरेर स्थानीय क्षेत्रमा आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
उखु किसान सुखलाल सहनीले पटकपटक स्थानीय तहमा सहमति गरे पनि आफूहरूले उखुको भुक्तानी नपाएपछि यहाँ आएर आन्दोलन गर्नुपरेको दुःखेसो गर्नुहुन्छ । उखु किसान, उद्योगी र सरकारी अधिकारीबीच गत भदौ मसान्तभित्र किसानको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्ने सहमति भए पनि पछिल्लो समय उद्योगी सो सहमतिबाट भागेका छन् । सरकारले निर्धारण गरेको प्रतिक्विन्टल रु ५३६ लाई उखु मिलले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उखुको तौलमा प्रतिक्विन्टल २० प्रतिशतसम्म सुख्खाकटीको नाममा का’टिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने किसानको माग छ ।
किसानका विषयमा कुरा भने नउठेको होइन । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद कोमल वली, बलरामप्रसाद बाँस्कोटालगायतले १५ दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई तत्काल निर्देशन दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उद्योगी फेला नपरेको बताइरहेको छ । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट किसानलाई भुक्तानी नदिएर हैरान पारेका उद्योगीको खोजी भइरहेको बताउनुहुन्छ । यो कुरा उखु किसानलाई पटक्कै विश्वास छैन् । विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको किसानको भनाइ छ ।
“विगतदेखि नै किसानको बक्यौता भुक्तानी दिन बाँकी छ, किन बर्सेनी उखु किसानको समस्या दोहोरिन्छन्, उद्योगीले किसानसँग उखु लिन्छन्, चिनी उत्पादन गरेर बिक्री गरेका छन् तर उनीहरूले किसालाई भुक्तानी नदिएर ठूलो घात गरेका छन् । यसको तत्काल छानबिन गरिनुपर्छ”, सांसद वलीले सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा भन्नुभयो । त्यसो त, प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले उखु किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी दिन विगतमा सरकारले दिएको निर्देशन उद्योगीले अटेर गरेका छन् । किसानको उत्पादन लिने तर भुक्तानी नदिने उद्योगीको नियतले किसान डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विद्यार्थी र कलाकारद्वारा प्रदर्शन तत्काल उखु किसानका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले विद्यार्थी र कलाकारले प्रदर्शन गरेका छन् । अपराह्न माइतीघर मण्डलामा भेला भएका नेपाल ल क्याम्पस र काठमाडौँ स्कूल अफ लका विद्यार्थीले सरकारको ध्यानकर्षण गराए । प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीले ‘किसानमाथिको शो’षण बन्द गर’, ‘चिनी मिललाई कारबाही गर’, ‘सरकारी चिनी मिल पुनः सञ्चालन गर’लगायत नारा लगाएका थिए ।
“प्रथमतः हामी विद्यार्थीभन्दा पनि किसानका छोराछोरी हौँ, उद्योगीले किसानको मूल्य भुक्तानी गरेन भने हाम्रो पनि भविष्य अनिश्चित छ”, प्रदर्शनमा उत्रिनुपरेको कारण बताउँदै नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी सन्दीपकुमार यादवले भन्नुभयो । किसान आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न माइतीघर पुग्नुभएका निर्मल शर्मा पनि तत्कालै सरकारले्दोलनमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न माइतीघर पुग्नुभएको छ ।
नागरिकता ऐन संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकोमा…
होलीमा खर्च हुने रकम नायिका करिश्माले दिईन…
ओली सरकारको असंबैधानिक कदम बिरुद्ध काँग्रेस एक…